स्व. कृष्णप्रसाद सापकोटा स्मृतिकप टि–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि क्रियटिभ युथ क्लब “ए” को पोल्टामा
By vijayafm on	 March 9, 2019 खेलकुद, फोटो फिचर, विविध खबर, स्थानीय
गैँडाकोट, २५ फागुन । सोह्र वर्षिय कप्तान विवेक पराजुलीको नेतृत्वको टिम क्रियटिभ युथ क्लब “ए” ले गैँडाकोटमा सम्पन्न क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि उचालेको छ । नवजागरण ग्रामिण विकास केन्द्र गैंडाकोट ९ थुम्सीको आयोजनामा भएको स्व. कृष्णप्रसाद सापकोटा स्मृतिकप टि–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगितामा फाईनलमा क्रियटिभ युथ क्लब “ए” ले गैँडाकोट कन्स्ट्रक्सनलाइ १९ रनले पराजित गरेको हो । क्रियटिभ युथ क्लबले पहिलो इनिङमा २० ओभरको खेल खेल्दै १ सय ४४ रन बनाएको थियो । क्रियटिभ युथ क्लबका लागि मञ्जील न्यौपानेले ३१ रन, हरि चौहानले ३० रन, विशाल पौडेलले २० रन, सुरज ज्ञवालीले १८ रनको योगदान दिएका थिए । टस हारेर बलिङ गरेको गैँडाकोट कन्स्ट्रक्सनका लागि बाबुराम भट्टराईले २ विकेट, राजन श्रेष्ठ, प्रशान्त आचार्य र रिजन काफ्लेले १÷१ विकेट लिएका थिए ।
१ सय ४५ रनको विजय लक्ष्य लिएर मैदानमा उत्रिएको गैँडाकोट कन्सन्स्ट्रक्सनले २० ओभरको खेलमा १ सय २५ रन बनाएको थियो । गैँडाकोट कन्सन्स्ट्रक्सनका भिरु शाहले अर्धशतक प्रहार गरेका थिए । अन्य कुनै पनि ब्याट्सम्यानले गतिलो प्रदर्शन गर्न नसक्दा ५६ रनको योगदान दिएका भिरुले पनि टिमलाइ जोगाउन सक्नुभएन । क्रियटिभका लागि बलर राजेश लम्सालले ४ ओभरमा २४ रन खर्चदै ३ विकेट लिनुभएको थियो । हरि चौहानले ४ ओभरमा १४ रन खर्च गर्दै १ विकेट लिनुभयो । चौहानले ब्याटिङ तर्फ पनि ३० रनको योगदान दिनुभएको थियो । अर्का बलर दिपेश श्रेष्ठले ४ ओभरमा १३ रन खर्चदै १ विकेट लिनुभएको थियो ।
बिजेता बन्न सफल क्रियटिभ युथ क्लब ए गण्डकी प्रदेश स्तरीय टुर्नामेण्टको च्याम्पियन समेत भइसको थियो । प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई ५१ हजार १ सय, कप, मेडल र प्रमाणपत्र, द्वितिय हुनेलाई २१ हजार १ सय, कप, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको आयोजक नवजागरण ग्रामिण विकास केन्द्रका अध्यक्ष नारायण सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । प्रतियोगितामा १६ टिमले सहभागिता जनाएको खेल संयोजक विनोद दराईले जानकारी दिनुभयो ।
नवजागरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सह आयोजक रहेको प्रतियोगितामा ईनाक्षी ईन्टरटेन्मेन्ट अष्ट्रेलियाको मुख्य प्रायोजक, सापकोटा ट्रान्सपोर्ट अष्ट्रेलिया, जयश्री फुड्स, गैंडाकोट कन्स्ट्रक्सन, अघोरी मल्टिप्रपोज विजनेश प्रा.लि. प्रायोजक, खनाल बजार, जयश्री सप्लायर्स, होटल जयश्री, रक एण्ड ज्याक र युनाईटेड पोलीस्याक्स सह प्रायोजक रहेका छन् । कार्यक्रममा रंगशालाको प्याराफिट निर्माण सहयोग गर्ने वडा सदस्य धामनाथ सापकोटा, पूर्व स्मृति कप दाता रत्नाखर सापकोटालाई सम्मान गरिएको थियो । अन्य सहयोगी संघसंस्थाहरुलाई सम्मान गरिएको संस्थापक अध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । आयोजक संस्था नवजागरण ग्रामीण विकास केन्द्रले ६ वर्षदेखि निरन्तर प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ । दोस्रो वर्ष भलिवल प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो भने ५ संस्करण त्रिकेट खेलको विकासका लागि प्रतियोगिता अयोजना गर्दै आइरहेको छ । त्रिकेट खेलको विकासका लागि खेलमैदानको समेत विकास र विस्तार गरिरहेको संस्थापक अध्यक्ष पिताम्बर सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।